2018 Chinese New Year (5) Day Vipassana Meditation Retreat
All yogis are cordially invited to (5) Day Vipassana Meditation Retreat during Chinese New Year 2018 conducted by Chanmyay Yeiktha Meditation Centre (Singapore) - CYMC as per following programme;
Date : 16 to 20 February 2018 (5 days)
Venue : No.3Verde View, Choa Chu Kang North 5, Singapore 688641.
Language : English, Burmese
Food and Lodge : Free of charge (Donation by amy amount)
Mr John - 9732 3450
Ms Joyce - 9836 2280
Ms Kyu Kyu Hlaing - 9799 6503
Mr Zaw Tun - 9832 9712
Email : ktuaung@gmail.com
(1) Day Vipassana Meditation Retreat
We would like to arrange including National Day with (1) day Vipassana Meditation Retreat as per following program. All yogis are cordially invited.
စင်္ကာပူနိုင်ငံ National Holiday Day နှင့် (1)ရက်တာ ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲကို ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ၊ အမှတ် 103 Verde View, Chua Chu Kang North (5), Singapore 688708 တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဒေါ်ကြူကြူလှိူင် - 97996503 ထံ ဆက်သွယ်စာရင်း ပေးသွင်းကြပါရန်။
အဘိဓမ္မာ အခြေခံသင်တန်း Level-1
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာတော်မြတ်အား နှလုံးသွင်းကာ နားလည်ကြည်ညိုရင်း အဘိဓမ္မာ အခြေခံသင်တန်း Level-1 ဖြေဆိုနိုင်ရန်အလို့ငှာ စင်္ကာပူချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဆရာတော် ဦးဝိဝေကာနန္ဒက သင်ကြားပို့ချပေးမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၅:၀၀နာရီမှ ၇:၀၀နာရီအထိ သင်တန်းအား ၂၀၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၁ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
6th Wasa Robe Offering Ceremony and Evening Dhamma Talk
All devotees are cordially invited to Dhamma talk by Venerable Chanmyay Sayadaw (Talk in Myanmar and English translation) and Wasa robe offering ceremony as per attached programme...
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓမ္မသဘင်နှင့်
ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ(စင်္ကာပူ) ၂၀၁၇ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ပွဲ ကို လာမည့် စနေနေ့ ဂျွန်လ ၂၄ရက်နေ့ တွင် Arena country club တွင် ညနေ ၄နာရီမှ ၈း၃၀ အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ အလှူရှင်တို့အား ထောပတ်ထမင်း အအေးတို့ဖြင့်ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးပါမည်။
ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ အရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဝေယာဝစ္စအဖွဲ့နှင့် အတူလက်တွဲကာ ပံ့ပိုးကုသိုလ်ပါဝင်ကြသော အဖွဲ့ဝင် အပေါင်း၊ အလှူရှင်အပေါင်းတို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ချမ်းမြေ့ရိပ်သာသည် ၂၀၁၁ခုနှစ်မှ စတင်ကာ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန့်ပွါးရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် အလှူရှင်များ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အတူလက်တွဲကာ သာသနာပြုလာခဲ့ပါသည်။
နှစ်စဉ်တရားစခန်းများနှင့်အတူ ဒါနသီလသမထ ၀ိပသနာတို့ စင်္ကာပူမြေတွင် စိုက်ပျိုးလာခဲ့ရာ အလှူရှင်များ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုမှာ သာသနာတော်အတွက် လွန်စွာ အကျိုးများလှပါသည်။
မြန်မာတို့၏ ရောက်သည့်အရပ်တွင် သာသနာတော်ပျံ့ပွါးရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ထောက်ပံ့ကာ အကျင့်မှန် အသိမှန်များ ဖြန့်ဖြူးပေးကြခြင်းမှာ လွန်စွာ အကျိုးများလှပါသည်။
ထို့ကြောင့် ချမ်းမြေ့ ဝေယာဝစ္စအဖွဲ့နှင့် အတူလက်တွဲကာ ဆက်လက်၍ သာသနာတော်ကို ထောက်ပံ့ကြပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
Vesak Day Celebration 2017
စင်္ကာပူချမ်းမြေ့ရိပ်သာ၏ ၁၃၇၉ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့တွင် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲ ဗုဒ္ဓါဘိသေကမင်္ဂလာကို ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလ (၁၀)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ ဆင်ယင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့ အိမ်ဂေဟာရှိ မြတ်စွာဘုရားကို ပင့်ဆောင်လာ၍ ပူဇော်နိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Happy Vesak Day to All Depotees are cordially invited to celebrate Vesak Day on 10th May 2017 (9:30 to 11:00am) at 103 Verde View, Choa Chu Kang North 5, Singapore 688708.